प्रवासमा जयजयकार छ प्रधानमन्त्री ओलीको
हामी प्रवासमा रहेका नेपालीले देश सँधै नेताले लुटुन्, आफ्ना र आसेपासेकोमात्र समृद्धि गरून् भन्ने पक्कै सोच्दैनौं । हामीमार्फत अरबौं रेमिटेन्स सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ त्यो रकमको उचित कार्यान्वयन होस् र देशले केही पाओस् भन्ने चाह हुन्छ ।
नयाँ शक्ति :चिकेन बिरयानी र करिश्माको सेक्सी लुक
भन्नलाई लेफ्ट डेमोक्र्याटिक पार्टी भनिए पनि त्यसमा जाने मानिसहरू प्रायः कर्मचारी, पुराना पत्रकार, काँग्रेस र एमालेमा कुनै मान भाउ नपाएका र अवैचारिक पृष्ठभूमिका चिकित्सक, व्यापारी र सबै कुनै न कुनै पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित एवम् राजनीतिक रूपमा दर्शनको दाउन सकिएका मानिसहरू नै परेका छन् ।
सरकारको नियत र वार्ताको रटान
सरकार फेर्ने नयाँ समीकरणमा अहिले राजनीतिक मञ्चका केही पात्रमात्र देखिइरहेका छन् । शक्तिकेन्द्रको भूमिका स्पष्ट भइरहेको छैन । केपी शर्मा ओलीको व्यवहार र बोलीका कारण सरकार बदल्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीको दावा सतहमा स्पष्ट हुन लागेको छ ।
बाबुराम भट्टराईलाई प्रवासबाट खुलापत्र
हिजो जनताका छोराछोरीलाई बुर्जुवा शिक्षाको उपनाम दिएर हातबाट कलम खोसेर बन्दुक राख्दै, आफ्नो छोरीलाई भारतको प्रख्यात होस्टेलमा राखी यही बुर्जुवा शिक्षा पढाउने तपाईं नै हो, विध्यालयमा पढाईरहेका शिक्षकलाई रेट्ने पनि तपाईं नै हो भने आज लाखौँ युवालाई अरबको ५० डिग्री सेल्सियसमा नेपाली २० हजार रुपैयाँ कमाउनकै लागि बिक्न बाध्य पार्ने पनि तपाईं नै हो ।
भट्टराईको युद्ध अपराध नयाँ शक्तिले पखाल्छ
तत्कालीन नेकपा माओबादीका एक भाष्यकार तथा रक्तरञ्जित १० बर्षे जनयुद्धका एक होनहार इन्जिनियर डाक्टर बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा नयाँ शक्ति पार्टीको उदय भएको छ जेठ ३० गते । साइत पनि गजबको जुराएर घोषणा गरिएको छ पूर्व निरङ्कुश राजा महेन्द्रको जन्मजयन्ती पारेर ।
हाइ ! बजेट, हेलो ! बजेट
प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि भएका ८ जना प्रधानमन्त्रीहरूमा सबैभन्दा महत्वाकांक्षी प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन् । उनले सपना देखे । सपना देख्नु उनको कमजोरी होइन । तर सार्थक र बजेटले भ्याउने सपना उनले पनि देखेनन् । उनले गरेका कतिपय घोषणालाई अहिले आएको बजेटले धोती लगाइदिएको छ ।
विद्यालय भर्ना अभियान, पाठ्यपुस्तक र यार्चागुम्बा
प्रकृतीवादीहरु पुस्तकीय ज्ञानको खरो विरोध गर्छन् । प्रयोजनवादीहरु क्रियाकलापको माध्यमबाट सिक्ने भन्छन् । उत्तर आधुनिकवादीहरु सिकाइका बहुमाध्यम हुन्छन् भन्छन् । इभान इलिचले निर्विद्यालयीकरणको वकालत गर्छन् । पाउलो फ्रेरेले बैकिङ्ग शिक्षाको विरोध गर्दछन् ।
उदाहरणहरूलाई सन्निकटीकरण गर्दा आज केही नेपालीहरू भन्दैछन्, खड्गप्रसाद ओली वास्तवमै एउटा सच्चा स्वप्नद्रष्टा हुन् । उनी पृथ्वीनाराण शाहभन्दा पनि बढी दूरदर्शी, महेन्द्र शाहभन्दा पनि बढी राष्ट्रवादी, जङ्गबहादुर राणाभन्दा पनि बढी सहासी छन् । उनका सपना अलौकिक होइनन् । यसै लोकका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको हठी र अधिनायकवादी कार्यशैलीबाट सरकारका सहयोगी प्रचण्डमात्र होइन, एमालेकै वरिष्ठ नेताहरु समेत विरोधमा उत्रिएका छन् र तीनबुँदे भद्र सहमति नाउँको पासो फाल्दै भद्राघडी कुरिबसेका छन् । प्रधानमन्त्री भने सत्ता परिवर्तनको विषयमा सहमति त के, ख्यालठट्टा, हाँसखेलसम्म पनि भएकै छैन भनेर ठोकुवा गरिरहेका छन् ।
अम्बर गुरुङ एउटा भाग्यमानी कलकार थिए । राजा महेन्द्रले उनलाई नेपाल टिकाएका थिए तर उनी गणतन्त्रात्मक नेपालको राष्ट्रिय गीतको संगीतकार बने । त्यतिमात्र होइन, उनी संगीत तथा नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानका प्रथम कुलपति भए ।
राष्ट्रियता के र कहाँ ?
नेपालमा राष्ट्रियताको नाउँ लिने वित्तिकै मदभेद र असमझ्दारी सुरु हुन्छ । किनभने आफुलाई राष्ट्रिय नसम्झने कोई हुँदैन । सबैले आफुलाई शुद्ध किसिमको राष्ट्रिय सम्झन्छन् । त्यसैले अरुलाई कट्टर राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी, महेन्द्र राष्ट्रवादी, जडवादी राष्ट्रवादी आदि भन्ने गरेका छन् । आखिर हाम्रो राष्ट्रवाद के हो र कस्तो हुनु पर्छ भत्रे सबैको चासोको विषय भएको छ ।